Flow With The Sprit Of Water Ọhaneze - Imewe Mmewe
Ọhaneze Ọtụtụ mgbe, a na-emetọ gburugburu obodo site na nsogbu onwe onye na nke onwe onye bi na nke na-ebute ọgba aghara a na-ahụ anya na-adịghị ahụ anya na gburugburu. Mmetụta amaghị ihe kpatara nsogbu a bụ na ndị bi na-abanye n'izu ike. Uche a na-emetụta ebe obibi na mmụọ na-emetụta ahụ, uche na mmụọ. Ihe osise ahụ na-eduzi, na-akwa, na-asacha ma na-ewusi "chi" dị mma nke oghere, na-elekwasị anya na nsonaazụ dị mma na nke udo. N'iburu n'uche mgbanwe na gburugburu ha, ọha na-eduzi ntụzi aka n'etiti ihe dị n'ime na mpụga ha.
Aha oru ngo : Flow With The Sprit Of Water, Aha ndị na-emepụta ya : Iutian Tsai, Aha onye ahịa : Chang yih hi-tech industrial park.
Ọhaneze Iutian Tsai Flow With The Sprit Of Water